१२ मिनेटमा चार गोल गर्दै बार्सालाई कोपा डेल रेको उपाधि – PathivaraOnline
Home > खेलकुद > १२ मिनेटमा चार गोल गर्दै बार्सालाई कोपा डेल रेको उपाधि
Poonam April 18, 2021 खेलकुद, समाचार, समाज	0
एजेन्सी । बार्सिलोनाले एथ्लेटिको बिल्बाओविरुद्ध गोलवर्षा गर्दै कोपा डेल रेको उपाधि जित्न सफल भएको छ । बार्सिलोनाले १२ मिनेटको अन्तरमा चार गोल गर्दै उपाधिमाथि कब्जा जमाउन सफल भएको हो ।
यता, एथ्लेटिकले भने दुई हप्ताको अन्तरालमा दुईवटा कोपा डेल रे फाइनल हार्न पुगेको छ । गत अप्रिल ३ मा सन् २०२० को फाइनल ढिला गरी खेलाइएको थियो । त्यसमा एथ्लेटिको रियल सोसिडाडसँग हार्न पुगेको थियो ।
पार्टी निकट शिक्षक संगठनको कार्यक्रममा शनिबार उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका उग्र गुटवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थी सोच भएकाले एकतासंगै सुरु गरेको षड्यन्त्र एकीकरण भंग भएसँगै क्लाइमेक्समा पुगेको दाबी गरे ।
उनले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता देख्न नचाहने र अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने विरुद्धको प्रतिकारमा आफुहरु लागिरहेको भन्दै छिटै त्यसको संकेत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘केपी गुटका प्रत्यक्षरूपमा संलग्न केही नेताहरु बाहेक आमरुपमा खुसीयाली थियो ।
३ बर्ष सम्म सम्बन्धमा बसेपछि गर्भवती प्रेमिकालाई मन्दिरमा बिवाह गर्ने भन्दै बोलाए, मन्दिरमा कुरिरहिन तर प्रेमी नआएपछि (हेर्नुहोस् भिडियो).
करणले कार्तिकलाई किन निकाले फिल्मबाट , इन्स्टाग्राममा गरे ‘अनफलो’
स्यावास नेपाल प्रहरी, मिल्यो यस्तो सफलता! सुमो चेक गर्दा प्रहरी नै चिकत! समातिए भारतिय नागरिक